साउने सोमबार कत्तिको लाग्छ ? - मनोरन्जन - नारी
साउने सोमबार कत्तिको लाग्छ ?
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ
श्रावण ४, २०७५
हामी जति आधुनिकतातर्फ जति बढे पनि हाम्रो संस्कृति एवं सामाजिक रीतिलाई भने चटक्कै बिर्सन सक्दैनौं । त्यसमा पनि हिन्दू महिलाहरूमाझ साउने सोमबार तथा तीजको व्रतको महिनाको महत्व विशेष छ । जति व्यस्त भए पनि सेलिब्रेटीहरू पनि यी चाडपर्वमा रमाउँछन् । साउन महिनासँगै विवाहित महिलाहरू शिवजीको आराधना गरी सोमबारको व्रत बस्छन् । रंगकर्मी सरिता गिरीलाई साउनको प्रत्येक सोमबार हरियो पहिरन वा एसेसरिजमा भए पनि हरियो मिक्स गर्न मन लाग्छ । उनले पहिलेदेखि नै साउन महिनाभरि चोखो खाँदै आएकी छिन् । कामको व्यस्तताका कारण व्रत नै नबसे पनि माछा, मासु, अण्डा आदि भने खाँदिनन् । गिरीका अनुसार साउन महिनामा वर्षा–झरीका कारणं कीटाणुको संक्रमण हुने हुँदा लुतो फाल्ने काम पनि गरिन्छ ।
साउन महिनामा बढी रोग लाग्ने सम्भावना भएकाले मासु, लसुन तथा उत्तेजित हुने खाना नखानु भन्ने भएकाले चोखो मात्र खान्छु । केही वर्षयतादेखि साउन महिनालाई फेसनसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएकोमा सरिता भन्छिन्–मनसुन लाग्यो, अब चाडपर्व नजिकिँदै छन् भन्ने सन्देशका साथ हरियो–पहेंलो लगाउने हो । सरिता साउनका प्रत्येक सोमबार बिहान मन्दिर जान्छिन् । त्यसबाट दिनभरि राम्रो अनुभूति हुने उनको अनुभव छ । सरिताका अनुसार जताततै हरियो–परियो देखिने र नयाँ पालुवा पनि पलाउने हुँदा शिवजीलाई मनपर्ने हरियो पहिरन लगाएर हिँड्नु त ठीक हो तर सामाजिक सञ्जालमा छाउन वा देखावटीका लागि मात्र फेसन गर्नु गलत हो ।
संचारकर्मी सरिता ज्ञवालीलाई साउने सोमबार रमाइलो लाग्छ । एक त वर्षाका कारण मौसम पनि सफा हुन्छ अनि अर्कातिर चारैतिर हरियाली हुने भएकाले ज्ञवाली फ्रेस पनि हुन्छिन् । सोमबार एकदिन भए पनि व्रत बस्दा स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने उनको धारणा छ । सरिताकी ९ वर्षीया छोरीलाई अझ बढी साउने सोमबार लाग्छ । उनकी छोरी पनि साउन महिनाभरि माछा–मासु खाँदिनन् । आमा भएपछि संस्कृति तथा संस्कारहरू आफ्ना सन्तानलाई पनि सिकाउनुपर्छ भनेर सरिता साउने सोमबारलगायत तीज, दसैं सबै नियमपूर्वक मनाउन खोज्छिन् । सरितालाई समाजले गरेको कामको फलो गर्न मन लाग्छ । त्यसैले उनी साउनको सोमबार सकभर आममहिलाहरूले जस्तै हरियो पहिरन, चुरा, पोते, टीका लगाएर हिँड्न चाहन्छिन् । हरियो मौसम तथा हरियो पहिरनले पोजिटिभ इनर्जीसमेत प्राप्त हुने उनको धारणा छ । हातमा मेहन्दी लगाई सोर्‍ह शृंगार गर्दाको रमाइलो नै अर्काे हुन्छ भन्दै ज्ञवाली भन्छिन्–वरिपरिको मौसमका कारण पनि समय सापेक्षजस्तो लाग्छ, साउने सोमबारको व्रत र पहिरन ।
गायिका रमिला न्यौपानेलाई पनि साउने सोमबार लाग्छ । उनमा शिवजीप्रति निकै आस्था छ । त्यसैले शिवजीलाई मनपर्ने मौसम र सोमबार मनपर्ने दिन भन्ने सुन्दै आएकी रमिला साउन महिनाभरि चोखो मात्र खान्छिन् अनि सोमबारका दिन व्रत बस्छिन् । उनी बिहानै शिव मन्दिर पुगेर पूजाआजा गर्छिन् । साउनभरि उनको हातमा मेहन्दी हुन्छ साथमा हरिया चुरा, टीका, पोते लगाएर हरिया तथा पहेंला पहिरनमा सजिन्छिन् । यसबाट आफूमा ऊर्जा र जोस बढ्ने उनको अनुभव छ ।
गायिका लसता जोशी अहिले मुम्बईमा कार्यरत छिन् । उनलाई सानैदेखि धर्म, ध्यान आदिमा रुचि थियो । त्यसैले उनी अरु चाडजस्तै साउने सोमबारमा पनि उत्तिकै रमाउँछिन् । साउनका हरेक सोमबार उनी शिवजीको व्रत बस्छिन्, आफ्नी छोरीको दीर्घायु एवं सफलताका लागि पूजा–आराधना गर्छिन् । जोशी साउनभरि नै पहिरन, जुत्ता, टीका, चुरा, ब्यागमध्ये कुनै न कुनैमा हरियो रंग प्रयोग गर्छिन् । सोमबार त सकभर हरियो कम्बिनेसनमै हिँड्न रुचाउँछिन् । यसरी महिनाभरि गरिने शिवजीको पूजा–आराधनाले वर्षभरि जिउन ऊर्जा मिल्ने जोशीले बताइन् । प्रकृतिको कलरसँग आफू पनि समाहित भएर हिँड्दा सकारात्मक भावना बढ्ने जोशीको विश्वास छ ।
नायिका तथा भिजे रिता कट्टेललाई साउन महिना नै विशेष लाग्छ । आकाश पनि सफा, पानी परेर बाटो भिजेको अनि जताततै हरियो मौसमले रितालाई निकै आकर्षित गर्छ । त्यसमा पनि उनी साउनलाई भगवान् शिवको आराधना, व्रत तथा चोखो मात्र खाने महिनाका रूपमा लिन्छिन् । साउने सोमबार विद्याका लागि पनि मानिन्छ । महिलालाई राम्रो वर, व्यापारीलाई राम्रो व्यापार, किसानलाई राम्रो खेतीपाती गराइदिने शिवको महत्व हरेक क्षेत्रमा छ । त्यसैले पनि रितालाई साउने सोमबार विशेष लाग्छ । कतिपयले सतीलाई प्रकृतिका रूपमा लिएकाले पनि साउनमा हरियो रंगको बढी महत्व भएको हुनसक्ने उनको धारणा छ । रिता अरूले जस्तै साउने सोमबारको दिन चोखो खाँदै, हरिया, पहेंला पहिरनहरू लगाउँछिन् । उनी यसलाई फेसनभन्दा सांस्कृतिक रूपमा मनाउनुपर्ने चाड मान्छिन् ।
मंसिर २०, २०७५ - डर लाग्छ
श्रावण ७, २०७५ - साउने सौन्दर्य सामग्री
श्रावण १, २०७४ - साउने वर्षा र व्रतलाई मिल्ने परिकार
श्रावण ३, २०७४ - साउनमा महिलाको शृंगार : स्वयंभित्र डुब्ने कला
श्रावण ३, २०७३ - साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज
श्रावण २७, २०७२ - साउने साेमबारकाे महिमा
थप केही मनोरन्जनबाट
रिग्रेट हुन्छु : श्वेता खड्का चैत्र ८, २०७५
सदीक्षाको सफलताको सूत्र चैत्र ३, २०७५
मिस्टर एन्ड मिस ग्रान्ड चितवन चैत्र २, २०७५
संभावना बोकेका नयाँ नायिका फाल्गुन ३०, २०७५
लिटिल मिस हेरिटेज नेपालको आवेदन खुला फाल्गुन २८, २०७५
विश्रामपछि श्वेता फाल्गुन २५, २०७५